Kin စျေး - အွန်လိုင်း KIN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Kin (KIN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Kin (KIN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Kin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 891 231.00
volume_24h_usd: $1 209 490.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Kin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Kin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
KinKIN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000008KinKIN သို့ ယူရိုEUR€0.000007KinKIN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000006KinKIN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000007KinKIN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00007KinKIN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00005KinKIN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000179KinKIN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00003KinKIN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00001KinKIN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00001KinKIN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000179KinKIN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00006KinKIN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00004KinKIN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0006KinKIN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00135KinKIN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00001KinKIN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00001KinKIN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00025KinKIN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00006KinKIN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.000848KinKIN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.00952KinKIN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0031KinKIN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00059KinKIN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000222
KinKIN သို့ BitcoinBTC0.0000000007 KinKIN သို့ EthereumETH0.00000002 KinKIN သို့ LitecoinLTC0.0000001 KinKIN သို့ DigitalCashDASH0.00000008 KinKIN သို့ MoneroXMR0.00000008 KinKIN သို့ NxtNXT0.000567 KinKIN သို့ Ethereum ClassicETC0.000001 KinKIN သို့ DogecoinDOGE0.00226 KinKIN သို့ ZCashZEC0.00000008 KinKIN သို့ BitsharesBTS0.000306 KinKIN သို့ DigiByteDGB0.000277 KinKIN သို့ RippleXRP0.00003 KinKIN သို့ BitcoinDarkBTCD0.0000003 KinKIN သို့ PeerCoinPPC0.00003 KinKIN သို့ CraigsCoinCRAIG0.00357 KinKIN သို့ BitstakeXBS0.000334 KinKIN သို့ PayCoinXPY0.000137 KinKIN သို့ ProsperCoinPRC0.000984 KinKIN သို့ YbCoinYBC0.000000004 KinKIN သို့ DarkKushDANK0.00251 KinKIN သို့ GiveCoinGIVE0.017 KinKIN သို့ KoboCoinKOBO0.00175 KinKIN သို့ DarkTokenDT0.000007 KinKIN သို့ CETUS CoinCETI0.0226
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 00:40:03 +0000.